China Syrup Washing Kuzadza Capping Machine vagadziri uye vanotengesa | IVEN
Sirasi (Liquid & Upfu)
Yeyakaomeswa manyuchi kana emvura manyuchi kugadzirwa, 50-500ml bhodhoro.
Sirasi Bhodhoro Kubata uye Kushambidza
Zvinoenderana nebhodhoro repurasitiki kana bhodhoro regirazi, isu tinogadzirira neIonic mhepo yekuwacha kana Ultrasonic yekuwachisa chiteshi, kuve nechokwadi chakakodzera tekinoroji yekushambidza bhodhoro rekuwacha.
Mushure mekushambidza mabhodhoro, bhodhoro enda kunzvimbo yekuzadza. Poda yakaoma inotora kuzadza sikuru, uye pombi yekushandisa pombi, yakanyanya kuzadza chaiyo, uye frequency kutonga, kugadzirwa kwekumhanyisa mirau, otomatiki kuverenga. Iine auto-stop function, hapana bhodhoro risina kuzadza.
Iine cap kubata
Inesarudzo kuomesa, chiteshi chekumisa
Yakakwirira inokwanisa capping rate
IVEN Sirasi Kushambidza Kuzadza Capping Machine Makomborero
1.Customized chinzvimbo kubva 3000-12000bottles / awa.
2.High otomatiki, inonzwisisika mashandiro maitiro uye optimization yekubatanidzwa.
3.Inokodzera dzakasiyana saizi sirasi, yakaoma uye mvura mhando.
4.Intelligent & Hunhu Hwekushandisa Sisitimu. Yakagadziriswa dhizaini yega yega chiteshi, PLC + HMI kutonga.
5.Hapana bhodhoro risina kuzadza, hapana bhodhoro risina kukopa.
6.Kuzadza kuzadza kwakaringana uye chiyero chakakodzera.
Zvinoshanda Specs. S 50-500ml
Kushanda Speed 3000-12000pcs / awa
Kuzadza Maitiro uye Akarurama Poda yakaoma: screw kuzadza, ± 2%
Mvura inogadziriswa: peristaltic pombi yekuzadza, ± 2%
Capping Nzira Yakagadziriswa Capping
Simba 380V / 50HZ, 19KW
Speed ​​kudzora Frequency kuzvidzora
Nzvimbo Yekugara Zvinoenderana nekugona kwakasiyana
Pashure: Zvoga Warehouse System
Zvadaro: Sirinji Kuungana Machine